यी हुन् ३० कटेपनि अविवाहित रहेका साउथ फिल्मका चर्चित हिरोइनहरु – Medianp
यी हुन् ३० कटेपनि अविवाहित रहेका साउथ फिल्मका चर्चित हिरोइनहरु
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, पुष २६, २०७४०९:३१
अनुष्का शेट्टी साउथ इन्डियन फिल्मकी सुपरस्टार हुन् । ‘बाहुबली’ र ‘बाहुबली–२’पछि अनुष्काको नयाँ फिल्म दर्शकले हेर्न पाएका छैनन् । उनी अब ‘भागमती’ फिल्मका साथ दर्शकमाझ आउँदै छिन् । उनको भागमती २६ जनवरीमा प्रदर्शन हुँदै छ । ३६ वर्षीया अनुष्का अहिलेसम्म अविवाहित छिन् । उनीजस्तै दक्षिण भारतीय फिल्मका केही चर्चित हिरोइन, जो ३० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी उमेरका छन्, तर बिहे भएको छैन । भारतीय अनलाइनले अनुष्कालगायतका अविवाहित केही चर्चित हिरोइनबारे रिपोर्ट तयार गरेको छ :
अर्की चर्चित हिरोइन हुन्, काजल अग्रवाल । सन् १९८५ जुन १९मा जन्मिएकी काजल दक्षिण भारतीय फिल्ममा मात्र नभई बलिउडमा पनि चर्चित छिन् । साउथमा ‘मकाधिरा’, ‘थुप्पाकी’, ‘चन्द्रमामा’लगायतका हिट फिल्म दिएकी काजलले बलिउडका ‘रुपेशल २६’ र ‘सिंघम’ फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन् । ३२ वर्षीया काजल तत्काल बिहे बन्धनमा नबाँधिने सोचमा छिन् ।
श्रीया शरण ३५ वर्षकी भइसकिन् । प्रेमको मामलामा उदार भए पनि बिहे बन्धनमा भने उनी पनि बाँधिएकी छैनन् । सन् १९८२ को सेप्टेम्बर ११ मा जन्मिएकी श्रीयाले सन् २००२ मा ‘सन्तोष’ फिल्मबाट अभिनययात्रा सुरु गरेकी हुन् । त्यसपछि उनले ‘टंगोर’, ‘शिवाजी दी बोस’, ‘कंदस्वामी’लगायतका दक्षिण भारतीय फिल्ममा अभिनय गरिन् । उनले ‘मिसन इस्तानबुल’, ‘दृश्यम्’लगायतका बलिउड फिल्ममा पनि अभिनय गरेकी छिन् । नयाँ पत्रिकाबाट
बैंकक उड्नुअघि ओली र प्रचण्डबीच बालकोटमा भेटवार्ता, कार्यदललाई विशेष निर्देशन
यो वर्ष पर्दामा देखिने छैनन प्रियंका चोपडा
कोकमा रक्सी मिसाएर खान दिई सामूहिक बलात्कार !
फिल्मबाट टाढा भएर पनि १०० करोड कमाउँछन् यी स्टार, के हो कारण ?
विश्वकै प्रतिष्ठित बेलायतको फेसन डिजाइनिङ अवार्डमा नेपाली चेली संयुक्ता श्रेष्ठ छनोट
तीन तलाको अनुमति लिएर १० तलाको भवनः उपराष्ट्रपतिद्वारा उद्घाटन, महानगरद्वारा बहिष्कार